Tababarka Tuunjiga - Somali Kidshealth
28/08/2013 27/09/2013 by admin
Waalidiin badan ayaa u hanqaltaaga inay arkaan ilmahoodu oo gaaray inay isticmaalaan tuunjiga iyo musqusha. Waxay muujisaa in ilmuhu gaaray heer korriin oo muhiima. Sidoo kale, waxay meesha ka saartaa howshii iyo kharashkii uu watay baambarka laga isticmaalo magaalooyinka oo loo labiso carruurta si saxarada iyo kaadida looga hortago inay halayso gogosha iyo dharka ilmaha.
Waxaa muhiim ah in ilmuhu maskax ahaan iyo jir ahaanba u diyaar yahay inuu barto sida loo isticmaalo tuunjiga. Inkastoo carruurtu kala duwanaan karaan, haddana caadiyan carruurta marka da’doodu gaarto 22 ilaa 30 billood ayay u diyaar yihiin inay bartaan isticmaalka tuunjiga. Waxaa xaqiiq ah barida ilmaha tuunjiga marka ay aadka u yar yihiin inay aad u dhib badan tahay, muddo dheerna ay ku qaadato inuu qabatimo isticmaalka tuunjiga.
Waalidiintu waxay ka qiyaas qaadan karaan marka ilmuhu diyaarka u yahay barashada tuunjiga waa marka ilmuhu koontorooli karo murqaha kaadi-haysta iyo malawadka. Waxaa calaamadahas ka mid ah iyadoo ilmuhu saxaroodo/kaadsho xilli gaar ah maalintii, cunuga oo aan habeenkii inta la jiifo aan kaadshin, ilmaha oo hurdo yar ka dib soo toosa baanbarkiisa oo qalalan iyo ilmaha oo dharka iska bixin kara dibna u gashan kara. Sidoo kale, waa in ilmuhu awoodaa inuu meel kori karo, sheegan karo in saxaro/kaadi hayso.
Talooyinka tababarka tuunjiga
Haku qasbin ilmaha barashada tuunjiga haddii uusan diyaar u ahayn jir ahaan iyo maskax ahaanba.
Gado tuunji le’eg ilmaha cabir ahaan.
Samee jidwal aad ilmaha barayso tuunjiga maalin walba, waqti gaar ku fariisi ilmaha tuunjiga. Xilliyada ugu fiican ee ilmaha la baro tuunjiga waa marka arroortii uu soo tooso, quraacda ka dib ama xilliga qubayska ka hor. Mararka qaar ilmaha oo qaba baanbarka haddii uu ku saxaroodo ama ku kaadsho baanbarka ka bixi baanbarka halaysan oo ku fariisi tuunjiga .
U sharax cunuga xiriirka ka dhexeeya musqusha iyo saxarada/kaadida. Carruurtu waxay jecelyihiin inay koobigareeyaan waxa dadka waawayn iyo carruurta ka waawayn samaynayaan – Markaa tus carruurta waawayn oo isticmaalaya musqusha.
Xilliga ilmuhu soo jeedo ka bixi baanbarka iyadoo tuunjiga loo dhigayo meel uu ka arki karo. Isla markaas u sheeg ilmaha inuu isticmaalo tuunjiga haddii kaadi/saxaro qabato. Mararka qaar xasuusi inuu ku fariisto tuunjiga. Xilliga uu ku fadhiyo tuunjiga mashquuli oo u sheekee ilmaha. Amaan badan huwi ilmaha haddii uu qaayibo inuu cabaar ku fadhin karo tuunjiga.
Ilmaha yar yar marka ay bartaan isticmaalka tuunjiga waxaa laga yaabaa in shilal dhacaan ah tusaale ahaan, inuu ilmuhu ilaawo inuu tuunjiga aado ama dharka iska bixin kariwaayo oo uu rooga iyo shamiitada ku kaadsho – markaas ha xanaaqin hana garaacin ilmaha .
Isticmaalka tuunjiga ee habeenkii wuxuu dhib ku yahay carruurta, sidaas awgeed waxaa muhiim ah inaan gebi ahaanba la joojin baanbarka. Ilmuhu habeenkii wuxuu u baahan yahay in loo galiyo baanbarka, waayo ilmaha yar waxaa laga yaabaa inay habbeenkii muddada dheer ee ay jiifaan ay awoodi waayaan inay koontoroolaan kaadida. Waxaa kale oo carruurtu habbeenkii ka cabsadaan inay gogosha ka kacaan oo ay dhinaca tuunjiga aadaan.
Gogol-qoynta gogosha waa caadi habbeenkii ilaa ilmuhu ka gaarayo 4 – 7 jir. Haddii aad goosato inaad ka joojiso inaad baanbar u xirto ilmaha habbeenkii joodariga ka kor mari bac si kaadidu aysan ugu gudbin joodariga.